Amathrendi we-Makeup alo nyaka we-2020 - Ungaphuthelwa! | Bezzia
Ukwindla sekuvele kukhona ekhoneni. Besingathanda ukuthi ihlobo lihlale isikhathi eside, kepha isikhathi siyaphela, yingakho kufanele ukuthi sesivele sazi i- izimonyo izitayela ngale sizini entsha. Isikhathi lapho ukubuyela esimeni sesivele siqala futhi lapho izinto eziningi zizoshintsha khona.
Ngenkathi ukwakheka kwehlobo babevele sebeshintshe okumbalwa, ezinyangeni ezimbalwa ezizayo kwakungeke kwehluke. Sizobona ukuthi imiphi imibala ezonqoba kanye nokuqeda okukhethekile kakhulu. Kodwa konke lokhu, ukubeka phambili amehlo azoba ngabalingisi abakhulu. Ngabe ufuna ukwazi imininingwane eminingi?
1 I-Cat-eye eyeliner kanye nokuhlukahluka phakathi kwamathrendi wokwenza izimonyo
2 Izinkophe zigcwalisa umbala
3 Ama-eyeshadows azokhanya ekwindla ka-2020
4 Amashiya nawo adlala indima ehamba phambili
I-Cat-eye eyeliner kanye nokuhlukahluka phakathi kwamathrendi wokwenza izimonyo
Njengoba simemezele, le sizini entsha nayo izoqala ukumakwa ngokugqama emehlweni. Ngaphandle kokungabaza, yibo abazozwana kangcono, ngoba izindebe zizohlala zimboziwe ngenxa yobuso. Ngakho-ke, akukho okufana nokubheja ku ukwakheka kwasekuqaleni kusukela ekubukeni. Ukucacisa njalo kungenye yezindlela ezisetshenziswa kakhulu ukubiyela ukubonwa futhi kulokhu, bekungeke kushiywe emuva.
Kepha kuza nokuhlukahluka, ngoba ukwakheka ngeke kuhlale kukuhle ngendlela esicabanga ngayo. Singagcina ngomugqa othambile ozoya ngasengxenyeni yethempeli. Ngoba ngokungeziwe ekujiyeni, futhi singakwelula kancane. Lokhu kuzokwenza ukubuka kwethu kuqinise kancane. I- umbala omnyama wezambiwa Ihlala njalo iyisisekelo futhi enqoba njalo ngesizini. Kepha ungangeza imibala ensundu noma imbala.
Izinkophe zigcwalisa umbala
Ukukhuluma ngemibala lapha sesivele sinesinyathelo sokuqala sayo. Ngoba kuvela ukuthi ama-eyelashes afuna ukunika ukukhanya okwengeziwe ekubukekeni futhi lokho, akufani nombala. Sizoshiya umascara ngombala omnyama ngemuva ukwamukela i- amathoni aluhlaza okwesibhakabhaka noma aluhlaza zihlala zihambisana. Kuyiqiniso ukuthi uma ufuna ukwakheka kohlobo oluthile lomcimbi, umbala omnyama uzophinde uthathe isigaba sokuqala. Kuhlala kuyindaba yokunambitha!
Ama-eyeshadows azokhanya ekwindla ka-2020
Kungenzeka kanjani ukuthi kungenjalo, izembozo zamehlo nazo ziyingxenye ebalulekile yokwenza izimonyo. Siphawulile ukuthi kule sizini, indawo engenhla yobuso yiyona ezocula kuyona. Ngakho-ke, kulokhu, lokho esizoba nakho kuzoba umbala omningi. Ngakolunye uhlangothi, izithunzi zensimbi yibo abazonqoba lapho sigqamisa imibala ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Ngaphandle kokukhohlwa igolide noma isiliva okusiza njalo ukuqedela isitayela sethu. Vele, kulabo abangakhululekile ngokukhanya okungaka, amathoni ansundu azoqhubeka nokuqina kwenye inkathi.
Amashiya nawo adlala indima ehamba phambili
Umqondo ngukuthi ingxenye ephezulu yobuso inokubaluleka okukhulu. Ngaphezu kwanoma yini ngoba ngaleyo ndlela izovezwa kumamaski futhi kuyinto yokuqala ezobonakala. Ngakho-ke, amashiya nawo awasekho emuva kakhulu. Sizobathwala banabantu futhi bamakwe, ngoba nabo bangabaphikisi be- isimo sobuso bethu. Ngakho-ke ukubanakekela nokuwahlanganisa nakho kuzoba yingxenye yenkambiso yethu enhle.
Singayinika ukuthinta kombala esikufunayo ngokombala wethu wezinwele. Into enhle ukuwahlanganisa nezimonyo kepha ngaphandle kokuqisa. Uma futhi ufuna ukuqeda okumangazayo phakathi kwamathrendi wokwenza izimonyo, lapho-ke ngeke ukhohlwe: amashiya alungiswe kahle futhi amakiwe, i-eyeshadows yensimbi futhi kunjalo, izinhlaka zokuqala kakhulu eziphimisa amehlo kahle. Unakho konke? Lapho-ke ukulungele ukuphumelela kule sizini entsha.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ubuhle » Maquillaje » Yiziphi izitayela zokwakheka kwalokhu kuwa kwe-2020?
Amathiphu alula woku-oda i-dresser yakho
Yini ongayibona eMunich, eJalimane